March 2019 – Trend.com.mm
Posted on March 31, 2019 April 2, 2019 by Shun Lei Phyo
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ ခရီးလည်းမထွက်ဘူး ၊ အပြင်လည်းထွက်မလည်ချင်ဘူး၊ အိမ်ထဲမှာပဲ နေဖို့များတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ၊ အလှူလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on သင်္ကြန်အားလပ်ရက်မှာ လုပ်စားသင့်တဲ့အစားစားကောင်းလေးတွေက…
လူကတော့နေကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ဘယ်တောပမှမလန်းဆန်းပဲ အတွေးတွေတဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။ လူကျန်းမာပင်မဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖျားနေတက်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက် ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းသာ နားလည်မြင်သာနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးရောဖျားနေသလား။ 1. သင်ဟာလူတွေနဲ့စကားပြောရမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတက်တယ် သေချာပါတယ်သင့်စိတ်ကလေးဖျားစပြုလာပါပြီ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ကိုယ့်စိတ်က လေးတော်တော်မှဖျားနေပြီလား…
လက်ရှိချစ်သူအပေါ်တကယ်မချစ်တဲ့သူတွေဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံတွေများပါလိမ့်…. (၁) ကိုယ့်ထက်တစ်ခြားမိန်းက လေးကိုပိုပြီး စိတ်ရောက်နေတတ်တာ… ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးမရှိပဲ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်သူငယ်ချင်းဆိုသူနဲ့အင်မတန်ရောရောထွေးထွေးနေတတ်ကြပါတယ်။သင်မကြိုက်ဘူးဘာညာပြောရင်လည်းသင်ကပဲနားမလည်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါသေးတယ်။ ဒီလိုကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စိတ်ကိုထည့်မစဉ်းစားပေးတတ်တာဟာသင့်ကိုမချစ်တာအသေချာပါပဲ။ (၂) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သူ့အချစ်တွေကို သင်တကယ်မပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးေ တွက ပြောပြ နေ…
Posted on March 31, 2019 March 29, 2019 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်ကြမှာပါ… (1) သကြားနဲ့လိမ္မော်သီး သကြားနဲ့လီမွန်သီးဖျော်ရည်နဲ့ကို ရောပြီး ချိုင်းကြားတစ်လျှောက်ကိုပွက်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်၃၀ လောက်အကြာထားပြီး ရေအေးအေးလေးနေဲ့ဆေးကြောပေးပါ။ဒီလိုနည်းကို တစ်ပတ်သုံးကြိမ်လောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on ပိုးသားလေးလိုနူးညံ့တဲ့Skin လေးပိုင်ဆိုင်စေဖို့
Posted on March 30, 2019 March 28, 2019 by Shun Lei Phyo
လူတိုင်းမလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုးတွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးကိုယ်သင်းရနံ့ကောင်းစေဖို့ဘယ်လိုအစားသောက်တွေကကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာ… (1) ဘီယာအစားရေများများသောက်ပါ ကိုယ်သင်းရနံ့မှာ မကောင်းတဲ့ချွေးနံ့ဆိုးတွေမထွက်စေဖို့ ရေများများသောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘီယာအသောက်များတဲ့သူတွေရဲ့ထွက်လာတဲ့ချွေးနံ့ဟာ သိပ်ကိုဆိုးဝါးတာကြောင့်ဘီယာကိုလျော့သောက်ပြီး ရေကိုသာများများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ (2) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on ကိုယ်သင်းနံ့ကောင်းမွန်အောင်ဒီလိုစားကြမယ်…
Posted on March 30, 2019 March 26, 2019 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့တွေရဲ့အတွေးကလုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီဆိုရင် လုံးဝအတည် အနေထားနဲ့ခပ်တည်တည်ခပ်အေးအေးနေဖို့ပြင်နေကြတာပါပဲ။ တကယ်တော့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့နေရာဟာ နေတတ်ရင် ပျော်စရာကောင်းပြီး၊ ရဲရင့်ရင်အခွင့်လမ်းပိုပေါတဲ့နေရာမျိုးပါ။ ဒီလိုဘ၀ရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေကိုစတင်ရတဲ့နေရာမှာ မလိုအပ်တဲ့အရှက်ကြောက်တရားတွေကြောင့်သင်တို့ရဲ့ တိုးတတ်လမ်းကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒါမျိုးတွေကို ရှက်ကြောက်နေဖို့လုံးလုံးမလိုပါဘူး…
သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန် ပွင့်တဲ့ အ ရွယ်ရောက်နေတာ တောင် သီးဖို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ဒီလိုလူမျိုးတွေကတစ်သတ်လုံးလူပျိုကြီးဖြစ်မဲ့အမျိုးဆိုတာယုံ…
Samsung Galaxy A Series ပြောလိုက်တာနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်တဲ့ Mid-range ဖုန်းတွေ ဆိုတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Phones, TechLeaveaComment on လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် Samsung ရဲ့ Galaxy A Series အသစ်စမတ်ဖုန်းများ
ညဘက်ဆို သူများတွေအိပ်နေပြီ ကိုယ်က မျက်လုံးကြောင်ပြီးဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်းအ ခြေနေတွေကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ညညတော်တော်နဲ့ အိပ်မ ပျော်တာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ညည တော်တော်နဲ့အိပ်မ ပျော်ဖြစ်တတ်ရင် ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့Try ကြည့်နော်…
ကင်ဆာလို့ကြားလိုက်တာနဲ့အရမ်းကို ထိတ်လန့်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ဒါပင်မဲ့လည်း အခုလိုတိုးတတ်ပြောင်းလဲ နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကင်ဆာလည်းကုရတာ မခက်ခဲတော့ပါဘူး။ ကုဖို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံတွင်းကင်ဆာကိုလက်ယက်ခေါ် နေပြီလား…